लकडाउनकै बीच मदिरा पसल खुले, लाइन व्यवस्थापन गर्न लाठीचार्ज ! (भिडियो) - Everest Dainik - News from Nepal
लकडाउनकै बीच मदिरा पसल खुले, लाइन व्यवस्थापन गर्न लाठीचार्ज ! (भिडियो)
काठमाडौंः दिल्लीमा मदिरा पसलहरूको अगाडि लामो लाइन देखिएको छ ।
राज्य सरकारले बिहान ९ देखि साँझ साढे ६ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएपछि मदिरा पसलमा लाइन लागेको हो । दिल्लीको देशबंधु गुप्ता रोडमा मदिरा पसलहरू खोलिएएका थिए, त्यहाँ यहाँ मदिरा किन्नको लागि लामो लाइन थियो ।
दिल्लीको काश्मिरी गेटमा पसलको अगाडि सामाजिक दूरीको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पुलिसले लाठीचार्ज गर्नु परेको छ । राजधानी दिल्लीबाहेक छत्तीसगढमा रक्सी पसल खोलेपछि मानिसहरूको पसलमा ठूलो भीड देखिएको थियो । कन्टेन्टमेन्ट क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा रक्सी पसलहरू खुला गरिएका छन् ।
कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशमा पनि रक्सी पसलहरूको अगाडि भीड मानिसहरू देखिए । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
फोटो र भिडियो – एएनआई
याे पनि पढ्नुस खाने, सुत्ने धेरै हुनसक्छ, व्यायाम पनि गर्नुहोस्
ट्याग्स: मदिरा, लकडाउन